Iimpawu eziphezulu ezi-10 ezihamba phambili kwiThelevishini
Abaphulaphuli beTV bafuna amaZombi, iDragons kunye ne-Androids
Yiyiphi na into eyenziwa ngabantu bonke malunga nokupholisa amanzi kule mihla? Abanye basemdala, abanye bawutsha, umyeni okanye amabini aboleka, kwaye bonke bafumana izikhokelo. Ezi zilishumi zibukele phezulu zibonisa ukuba ezininzi zaseMerika zikwazi ukuyeka ukubukela.
I-Walking Dead (AMC)
" Abafileyo Abahambayo " akukhona nje ngeZombi, ngokuphathelele uluntu lwesintu esaphila kwi-apocalypse kunye nendlela ekufuneka yenze ngayo impucuko entsha ngaphandle kobutyebi obukhoyo kweli hlabathi. Umgca? I-AMC kuphela yenza i-episodes ezili-16 ngexesha! Olu chungechunge lusekelwe kwikheyibhile yencwadi yamahlaya yegama elifanayo. Imiboniso yeTV iyakuthandwa kakhulu inokuba neqela loxhasano lwentetho, "I-Talking Dead," ehamba ngokukhawuleza emva kwesiganeko ngasinye. Ngo-2015, i-spinoff ethandwayo "Ukwesaba Abafileyo Abahambayo" kwaqala njenge-prequel kwi "Dead Walking". Kaninzi "
Umdlalo weZihlalo zobukhosi (HBO)
Ngokusekelwe kwinqaku elincinci elincinci leencwadi elithengisayo elithi "Ingoma Yomlilo Nomlilo," nguGeorge RR Martin, " iMidlalo yeZihlalo zobukhosi " ichaza iindaba zeentsapho ezimbini ezilwa namandla oBukumkani boBukumkani abaSebenzi baseWesteros. Iifayile zeencwadana zeencwadana ziye zafika kule drama kwaye ziza kuzikhusela ngokumelene nabanikazi ngokuqinisekileyo njengale miyoyo ekhalipheyo egcina iWall. Njengabanye abaphikisana naloluhlu, olu chungechunge luba nethemba elihle lokubhala ngokubhaliweyo kunye neveki eqhubayo ngokulinganayo emva kweveki, kwaye bonke abantu bayakwazi ukuthetha ngoMvulo kusasa. Kaninzi "
Abahlali beevenkile abazizityebi ngobomi ngaphandle kwehlabathi bafuna umdlalo othabisayo eWestworld, engeyona ipaki yakho yokuzonwabisa. Le paki yexesha elizayo, elithatyathwa yi-android "yemikhosi," ivumela iindwendwe zayo ukuba ziphumelele izicwangciso zabo. Kungakhathaliseki ukuba ingaba yinto engafanelekanga into engafanelekanga, akukho miphumo yeendwendwe zepaki. "Westworld" ivela kwi-movie ye-Michael Crichton ka-1973 yegama elinye. Le ngqungquthela ye-sci-fi entshonalanga i-star-winner no-Oscar u-Anthony Hopkins kunye noMninimzi we-Golden Globe u-Ed Harris.
IVikings (Umlando wesiteshi)
"IiVikings" yidrama yembali elandela ubomi kunye noxinzelelo lukaViking Ragnar Lothbrok, iqhawe laseNorse elixhaphazwayo kwi-folklore yaseDenmark neSweden. Inkosi yaseScandinavia, kunye nesibetho saseNgilani kunye neFransi, iyaphumelela iindlalifa kunye nomboniso ubonisa ukulwa kwabo eYurophu naseMeditera.
I-Gray's Anatomy (ABC)
Ephakathi kweDkt. Meredith Grey, le ngqungquthela yezokwelapha eyayise Seattle ibhekane nobudlelwane babo oogqirha abancinci ababanjwe ngabaqeqeshi bezonyango kunye nokukhula kwabo kwiindawo zonyango kunye nabantu ngabanye. Iqela loogqirha lijongene nemingeni emangalisayo, uthando, ukulahleka kunye nokuphumelela kwazo zonke iintlobo.
Umboniso ophumelele kakhulu "24" wawuthandwa ngenxa yezizathu-umdlalo othakazelisayo kunye nomhlathi wenkomo owawuvela ngeveki emva kweveki. Abanye abantu abanjalo abakulethe konke okuvuyisayo bangaphantsi kwalolu hlobo olumangalisayo lwe-spy American spy series. Nangona kungenakho konke ukuqhuma kwe-24, "isenzo sengqondo singenakunceda.
I-Big Bang Theory (CBS)
I-"Big Bang Theory" yinguqulo ye-geeky ye "Abangane" kunye namafilimu aseCaltech ekucingeni imingeni yobomi, njengendlela yokufumana usuku ukuya kwi-rally malunga neyunithi ye-string, iDungeons kunye neDragons, kunye nevidiyo yokudlala. Umboniso ujoliswe kumhlobo omane onobuhlanga kunye nentombazana enentlalontle esondeleyo ehamba kunye nohlobo lweMensa roomies.
Kanye emva kwexesha (ABC)
I- White White , i-Cinderella, i-Rumpelstiltskin, i-Prince Charming, kunye nabo bonke abanye abalinganiswa be-fairytale abaziwayo owaziyo ubomi bakho bonke. Ngoku, zicinge ehlabathini lenene kunye nomfazikazi okhohlakeleyo obonakala ebonisa ukubetha. Uya kufunda amabali endala abo bonke abalinganiswa. Kwaye, mhlawumbi uza kufumana umlindi wokulinda ukuze ubone ukuba kwaye ngaba ababalwayo bakhumbula ukuba ngubani ngokwenene kwaye baya kwenza ntoni ngolwazi. Yimfihlakalo emangalisayo ongenakukunceda kodwa ubukela iveki nganye.
Indaba ye-American Horror (FX)
Sonke sithanda imfihlelo enkulu ebandakanya ukuzama ukufumanisa ukuba ngubani ofile kwaye ophilileyo, kodwa xa udibanisa loo nto ngento edibanisayo, unomnye wezinto ezithandekayo zithelevishini. Ixesha ngalinye lizisa indawo entsha ye-haunted, kunye nabanye abalingisi abafanayo (badlala indima eyahlukileyo) kunye nemfihlelo entsha entsha.
"I-Flash" yidrama ye-superhero yaseMelika esekelwe kwi-DC Comics udidi lwegama elifanayo. Iquka umqhubi wezobugebengu ojongene nezindleko ongahamba ngokukhawuleza. Ngo-2014, unyaka owawuqala, le ngqungquthela ye-CW ye-"Arrow" yechungechunge lwe-superhero yaphumelela i-award's People's Choice kwidrama entsha yeTV.
Imiboniso ye-TV ephezulu ye-8 ye-Conservatives
I-Flower Duet Iingoma kunye ne-Text Text
I-Supermajority Vote e-US Congress
Imvelaphi ye-Ñ eSpanishi
Konke Okufuneka Ukwazi NgoLucid Ukuphupha
Isikhokelo soConjugation kwisenzi sesiFrentshi "Perdre"
Iiposenti ezingama-25 zePop yaseMusic zoLonke ixesha
URichard III no-Anne Anne: Kutheni Batshata?
Imfazwe YaseMerika: iMfazwe yasePeebles Ifama
UJanet Evanovich Iincwadi zokugcina iiMibhalo ziguquka
I-Architecture e Chicago
Iimfundiso Ngee-Snowy Owls
Iikhuphethi ezifakwe kwiRotary
Ukunyanzelisa i-United States